I-Guesthouse yase-Bükkfa - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Viki
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jan 14.
Indlu encane ethandekayo e-Bükkszentkereszt enhle, ephilayo, indawo yesibili ephakeme kakhulu e-Hungary.
Indlu ihlome ngokuphelele futhi yavuselelwa ngo-2020. Ithala linikeza ukubukwa okuhle kwamahlathi e-Bükk. Kungenzeka ukupheka nokubhaka engadini. Kunenqwaba yezindlela zokuhamba eduze. Lillafüred 1.5 amahora ukuhamba noma 15p ngemoto. Kunezitolo ezimbalwa, abagwayi kanye nezindawo zokudlela ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Ngesicelo, siyajabula ukuhlinzeka ngomhlahlandlela wokuvakasha. Ukuvakasha kwezingane nakho kuyatholakala.
INCAZELO YEndlu KANYE NOLWAZI OKUBALULEKILE
imibhede emibili iphushelwe eduze komunye nomunye, okungukuthi kungenzeka ukulala ngokwehlukana futhi ndawonye, i-TV, amawodrobhu, ama-hangers
i-double bed, i-TV, amashalofu, isifuba samadrowa, irediyetha kagesi, ama-hangers
Igumbi lokuhlala: umbhede usofa, itafula lekhofi, iziphanyeko, ikhabethe elivulekile, i-stairwell, irediyetha kagesi ehambayo
Igumbi lokugezela: indlu yangasese, indishi yokuwasha, ishawa, irediyetha yethawula
Phuma kuvulandi. I-balcony enetafula lokudlela nezihlalo.
Ikhishi: ifriji, i-electric double stove-top, i-microwave, i-coffee maker, iketela, i-toaster, amashalofu okugcina, izitsha, amapuleti, izinto zokusika.
Indlu yangasese enomcengezi wokugeza
Phuma ethafeni. Itafula lokudlela elinezihlalo ethaleni.
Ngesicelo, siyajabula ukunikeza umhlahlandlela wezivakashi ozonikeza izivakashi uhambo lobunzima obufanele netimu futhi abelane ngengcebo yolwazi oluthakazelisayo mayelana nemvelo yendawo nomlando phakathi nohambo. Ukuvakasha kwezingane nakho kuyatholakala.
- Ukubhema akuvunyelwe ngaphakathi endlini.
- Sicela ulethe ithawula! Ilineni lombhede lihlinzekwa.
- Ukuhlanza nokuwasha kungahlinzekwa ngemali.
- Sicela ugweme imisebenzi enomsindo ephazamisa omakhelwane bakho!
- Sicela ucime ama-radiator kagesi uma ungekho endlini!
"Ngenxa yokuthi sibade, kuhlale kubanda cishe ngo-4-5 degrees kunezinye izindawo, ngakho letha izingubo ezifudumele!"
- Asikukhuthazi ukugcina izitebhisi zivulekile lapho ufika nezingane. Isetshenziswa ngokuzifaka wena engozini!
- SICELA UYIHLONIPHELE IMITHETHO KAHULUMENI YAMANJE ETHATHWE YI-VIRUS YOMQHELE! NGAPHAMBI KOKUBHALISA, HLOLA UKUTHI IYAYATHOBELA NGOBA UMA UKUBHEDA KUDINGEKA UKUZE UKHANSELE UKUBEKA, ASIKWAZI UKUZIBANDELA!
ubusuku obungu-7 e- Bükkszentkereszt
Indlu itholakala endaweni yokuzilibazisa yase-Bükkszentkereszt, eduze kwehlathi, endaweni ethule, enokuthula.
Isitolo esiseduze (Mami ABC): 10p walk
Isiteji esikhulu, ikhefi, indawo yokudlela yase-Amber: 15p ukuhamba
Ukuphulukisa amatshe: 15p ukuhamba
I-Private Inn: 20-25p ukuhamba ngezinyawo
Inombolo yepholisi: MA20012705
Hlola ezinye izinketho ezise- Bükkszentkereszt namaphethelo